मान्छेले बर्दी लगाउँदैमा यति अमानवीय कसरी बन्न सक्छ ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/मान्छेले बर्दी लगाउँदैमा यति अमानवीय कसरी बन्न सक्छ ?
काठमाडौं । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रहरीले काखमा बच्चा बोकेकी हेमा श्रेष्ठमाथी लाठी चलाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहिबार ललितपुरको एक घरमा बच्चा बोकेकी महिलालाई धकेल्दै प्रहरीले पछाडीबाट लाठी चार्ज गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला भाईरल भईरहेको छ । उक्त घटनाको अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुट, ट्वीटर लगाएतकोमा प्रहरीको उक्त कार्यको सबत्र बिरोध भईरहेको छ।
भने प्रहरीले पनि उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्ने बताएको छ । बिहिबार ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित नेपाली सेनाका पुर्वजर्नेल हेम खत्रिको घरअगाडी केहि महिला जम्मा भएका थिए । एक महिलाले खत्रिसंग आफ्नो सम्बन्ध रहेको तर उनले आफुलाई श्रीमती नस्वीकारेको भन्दै अन्य महिलाको साथमा त्यँहा गएकी थिइन् साथै उनले बिगत चार महिनादेखी यसरी खत्रिको घरमा धर्ना दिरहेको बताईएको छ ।
आफ्नो घर बाहिर महिलाहरु भेला भएको दखेपछी खत्रिले प्रहरीलाई अबर गरेको र केहि समयमा प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीका प्रहरी खत्रिको घरमा पुगेको थियो । भेला भएकालाई नियन्त्रण गर्न पुरुष प्रहरी गएको बताइएको छ ।
प्रहरीले त्यहाँबाट महिलाहरुलाई हटाउन खोजेको र उनिहरुले नमानेपछी बल प्रयोग गरेको बताएको छ । त्यहि क्रममा इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेलले पनि लाठी चलाएका थिए । उनले एक बच्चा बोकेकी महिला हेमा श्रेष्ठमाथी लाठी चलाएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको छ ।
उक्त घटनाप्रति डा भट्टराई भावुक हुँदै घटनाको निन्दा गरेका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटमा यस्तो लेखेका छन्ः
“मान्छेले बर्दी लगाउँदैमा यति अमानवीय कसरी बन्न सक्छ आमाले गल्ती गरिहोलिन्, तर त्यो अबोध शिशुको के गल्ती थियो र त्यो शिशु आमाको हातबाट खसेर टाउकोमा चोट लागेको भएरु गिरफ्तार गर्नै परे समातेर भ्यानमा हाल्न सकिन्नथ्यो ओलीराजमा सबै छोटे राजा No,No! This is not pardonable!”